UK chọrọ ka nzuzo Apple kwụsị | Esi m mac
Afọ 2015 agwụbeghị mana ọ dị ka afọ 2016 ga-abụ afọ ọrụ siri ike maka ụlọ ọrụ teknụzụ na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na Internetntanetị n'ozuzu ya na United Kingdom chọrọ ịmalite iwu ọhụrụ nke ahụ ga-amanye ụlọ ọrụ dịka Apple ịhapụ ụdị ụzọ azụ na sistemụ ha ka gọọmentị wee nwee ike ịnakọta data onye ọrụ.
Ọ bụghị oge mbụ ka etinye ọnọdụ a na tebụl ma ọ dị ka ọtụtụ na ndị gọọmentị n'onwe ha chọrọ ịbanye n'ime nzuzo cybernetic nke ndị ọrụ. Apple achọghị ka nke a gaa n'ihu na ha ezigala akwụkwọ ozi na-ekwupụta na ha ekwenyeghi na atụmatụ a n'aka ndị omeiwu nke Britain.
The ozi ọma anyị na-enye gị nwere ihe ọ bụla na-eme na taa egwuregwu ụbọchị na ọ bụ kpam kpam eziokwu na Iwu Iwu Iwu na-echere nkwado na UK. Ọ bụrụ na anabatara iwu a, nsonaazụ ya ga-abụ ọdachi ebe ọ bụ na mba ndị ọzọ, gụnyere United States, ga-esonye ya na a ga-achịkwa nde ndị ọrụ kpamkpam.
Mgbe anyị kwuru na a ga-achịkwa ha n'ụzọ zuru oke, anyị na-ekwu na, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ dịka Google ga-echekwa akụkọ ihe mere eme nke otu afọ nke ị nwere ike ịmara ebe nrụọrụ weebụ niile ebe onye ọrụ ọ bụla nke netwọk nke netwọk na-abanye ma ọ bụ na-akwụsị ịbanye.
Tụkwasị na nke ahụ, sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ niile kwesịrị ikwe ka nchịkọta nke ozi onye ọrụ, na-aghọ mma agha ihu abụọ na enwere ike iji ya mee ihe dị iche karịa iwu nke anyị na-ekwu maka ya.
Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ n'ikpeazụ iwu nke odeakwụkwọ nke ime obodo nke gọọmentị nke United Kingdom chọrọ, Theresa May, na-emecha kwenye ma ọ bụ na akwadoghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » UK chọrọ nzuzo Apple na-ekwu na ọ ga-emebi